A ije site na Casablanca na Morocco | Akụkọ Njem
A ije site na Casablanca na Morocco
N'agbanyeghị eziokwu na ọ bụ obodo kachasị ukwuu na Morocco, ọtụtụ ndị njem na-aga Casablanca na-eme nke ahụ n'ihi na ha haziela ụzọ gafere mba ahụ na-eduga ha ebe ahụ.
Ọ bụ ezie na Rabat bụ isi obodo nchịkwa, Casablanca bụ isi ụlọ ọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ mba ụwa na nke na-arụ ọrụ dị ka injin ego. Nke a, ya na oge French gara aga, na-eme ka ọ bụrụ ihe atụ magburu onwe ya iji hụ ọdịiche na ngwakọta dị n'etiti ụwa ọdịda anyanwụ na nke Alakụba.
Onye ọ bụla maara Casablanca na mberede na-ahụ n'anya ruo mgbe ebighị ebi. Kedu ebe na-eme ka obodo Moroccan a mara mma?
1 Eze Hassan II ụlọ alakụba
3 Nnukwu alllọ Ahịa Morocco
4 Medina nke Casablanca
5 Ogige Mohammed V na Royal Obí
6 Ebe ndị Juu na Morocco
Eze Hassan II ụlọ alakụba
Ọ bụ ihe nnọchianya nke Casablanca ma ewere ya dị ka nke atọ kachasị ukwuu n'ụwa. Ewubere ya iji sọpụrụ Eze Hassan nke Abụọ, onye chịrị Morocco n’agbata 1961 na 1999, iji mee ncheta afọ 60 ya.
Mosquelọ alakụba a na-emeghe ndị mmadụ n'okpukpe ọ bụla ma ị nwere ike ịga na ime ya site na ịnata ọrụ nke onye ndu. Templelọ nsọ a nwere ikike ịnabata ndị na-efe 25.000 n'ime ya na ihe dị ka 80.000 n'ogige dị ná mpụta.
Ndị omenkà Moroccan kacha mma na narị afọ nke XNUMX rụrụ ọrụ na alakụba Hassan nke Abụọ na Casablanca. Maka ihe owuwu ya dị ka okwute na osisi ejiri aka mee, marble na ala enyo, ejirila ọlaọcha mara mma na mpempe ọla edo na ihe mkpuchi kpuchie mgbidi ahụ.
Minaret ya dị mita 210 dị elu na-ebili n'akụkụ mmiri nke ndị Atlantic na ndị Alakụba nwere ike ikpe ekpere mgbe ha na-eleba anya na mmiri mara mma nke oke osimiri.
Na n'akụkụ ụlọ nsọ a bụ La Corniche. Mpaghara a bụ ebe kachasị mma iji hụ osimiri dị na Casablanca. Mgbagharị dị jụụ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ije ije dị jụụ, anwụ na mmiri. Ma ọ bụ na ndị na-efe mmiri si n'akụkụ ụwa niile na-abịa La Corniche beach iji gbagoo ebili mmiri nke Atlantic ma aụọ mmanya na oké osimiri ahụ n'azụ na ụlọ oriri na ọ anyụ anyụ ọ bụla dị n'ógbè ahụ.
Nnukwu alllọ Ahịa Morocco
Near the La Corniche area nwekwara Morocco Mall. Shoppinglọ ahịa a bụ otu n'ime ndị kasị ibu na ndị kasị dara oké ọnụ na Morocco. Ọ bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ ndị Italia ahaziri ya bụ Davide Padoa, ma nwee 250.000 m² nke 70.000 raara onwe ya nye naanị ụlọ ahịa na-agbasa ala atọ. Na mgbakwunye, o nwekwara ebe ezumike, ụlọ nri na nnukwu ubi.
N'ebe a na-akpọ Souk, ị nwere ike ịzụta ihe ndị na-ahụkarị site na sooks Moroccan dị ka slippers, kaftans, djellaba, ngwa nri, mmanụ, wdg. Fọdụ ihe ncheta magburu onwe ya si Casablanca.
Maka ntụrụndụ ezinụlọ, o nwere ihe nkiri Imax, nnukwu akwarium (Aquadream) na obere ogige ntụrụndụ (Adventure Land), na mgbakwunye na isi iyi egwu kachasị ukwuu n'ụwa, nke nwere ihe karịrị otu narị agba jets na ha na-aga kwaa egwu.
Medina nke Casablanca
Otu n'ime ebe kachasị mma ịhụ na Casablanca bụ medina ochie ya. N'agbanyeghi n'inweghi anwansi anwansi nke ndi ozo nke Moroccan ochie, uzo nke uzo di warara nke emere n'oge XNUMXth na Casablanca kwesiri nleta.
Na Medina nke Casablanca, n’etiti square na ụlọ alakụba, anyị ga-ahụ ụdị kọfị niile, ụlọ nri na ụlọ ahịa akwa, akpụkpọ ụkwụ na ihe ịchọ mma. Ebe pụrụiche iji nweta ihe ncheta nke njem ahụ yana iso ndị bi na-emekọ ihe ma debe ụbọchị ha ụbọchị.
Ogige Mohammed V na Royal Obí
Mohammed V Square dị na Casablanca bụ ebe nchịkwa obodo ahụ na otu n'ime ọrụ kachasị mma nke onye France na-ese ụkpụrụ ụlọ Henri Prost, bụkwa onye na-ahụ maka atụmatụ nke obodo Fez ma ọ bụ Rabat. N'aka nke ọzọ, Obí nke Casablanca dịkwa mma ileta, ọbụlagodi ma ọ bụrụ naanị site n'èzí ebe ọ bụ na enweghị ike ịnweta ya dịka ọ bụ otu n'ime ebe obibi nke eze Moroccan ugbu a.
Ebe ndị Juu na Morocco
Anyị na-eche ihu naanị ụlọ ngosi ihe mgbe ochie raara nye ọdịbendị ndị Juu na mba Arab, ihe ịtụnanya. Muselọ ihe ngosi nka a na-akọ akụkọ ihe mere eme nke okpukpe ndị Juu nke 2.000 na Morocco na-elekwasị anya na obodo ndị Juu na Casablanca, nke bụ ebe ọtụtụ ndị Juu obodo ahụ bi. N'ime ya onye nleta ga-ahụ ihe osise, foto, ihe ndị eji achọ mma, akwa na mmeputakwa nke ụlọ nzukọ dị iche iche nke Moroccan.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » A ije site na Casablanca na Morocco